Vovonana mampiray -« Raharaha Antsakabary » : « Tokony hifona ny fanjakana » | NewsMada
Vovonana mampiray -« Raharaha Antsakabary » : « Tokony hifona ny fanjakana »
Nanao fanambarana momba ny « Raharaha Antsakabary » ny « Vovonana Mampiray ny vahoaka ho an’ny fanorenana ifotony sy ny fanarenana an’i Madagasikara ». “Tena endriky ny fanjakana tsy tan-dalàna izao ka mitaky fandraisana andraikitra maika sy fanovana ny toe-tsaina mifanilika adidy. Tsy mila miandry fitoriana akory ny mpitondra manoloana izao heloka be vava izao fa mampiseho avy hatrany ny fahadisoany ka mitondra ny fialan-tsiny sy fifonana ary fiaraha-miory ampahibemaso. Endriky ny fanjakana tsara tantana izany”, hoy izy ireo. Nohitsin’ny fanambarana fa tompon’andraikitra voalohany ny fanjakana na nihoa-pefy na tsia ireo polisy nalefa namita iraka tany Antsakabary, ka niantso ny fitondrana izy ireo handray andraikitra amin’ny fanonerana tsy misy hatakandro ireo tsy manan-tsiny. “Handray fepetra hentitra koa amin’ireo nahavanon-doza mba ho ohatra velona ho an’ireo mpitandro filaminana hafa mety hihoa-pefy ka tsy hiverenan’ny tranga mampalahelo toy izao intsony”, hoy izy ireo. Etsy andaniny, mitsipaka marindrano sady manameloka ny fitsaram-bahoaka ny Vovonana mampiray satria tsy mifanaraka amin’ny soatoavina malagasy izany sady manitsakitsaka ny fanjakana tan-dalàna, ny zon’olombelona sy ny lalàna iraisam-pirenena…
Tsy tongatonga ho azy ny fitsaram-bahoaka
Na izany aza anefa, tsy tongatonga ho azy ny fitsaram-bahoaka araka ny nambaran’izy ireo. Notanisain’izy ireo ho anton’izany ireto. Tsy mahatoky ny rafitra sy ny fitondram-panjakana ary ny fitsarana ny vahoaka noho ny kolikoly, ny fanamparam-pahefana, ny tsikombakomba amin’ireo vahiny lazaina fa mpandraharaha, ny fitsinjarana tsy ara-drariny ny harem-pirenena, ny asan-dahalo, ny fandraisana anjaran’ireo mpitandro filaminana sasany amin’ny fiaraha-miasa amin’ireo jiolahy, ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena, ny fivangongon’ny fahefana eo anivon’ny fitondrana foibe… “Mitarika amin’ny fampahantrana hatrany ny vahoaka izany tranga rehetra izany”, hoy izy ireo.
Manoloana izany, manao antso avo amin’ny filoham-pirenena sy ireo hery velona rehetra ny Vovonana Mampiray mba hifanatona sy hiray hina ary hiaraka hanomana ny loabary an-dasy ho fanorenana ifotony sy ny fanarenana ny firenena mialohan’ny fifidianana ny filoham-pirenena. “Mba hisorohana ny korontana mety hitranga eto amintsika, mialoha na aorian’ny fifidianana izany”, hoy izy ireo.